Weerarada Kenya ma waxay noqdeen “wixii xun ba Soomaali baa leh”? | Baydhabo Online
Weerarada Kenya ma waxay noqdeen “wixii xun ba Soomaali baa leh”?
Tan iyo markii ururka Al Shabaab ay weerarka ku qaadeen dhismaha DusitD2 ee magaalada Nairobi waxaa warbaahinta dalka Kenya ay ku soo warrantay in dadkii weerarki geystay ay ahaayeen dad ka soo jeeda qowmiyadaha aan Soomaalida aheyn ee ku nool dalka Kenya.
Arrintaasi oo la aaminsan yahay inay yareysa xiisaddii ka dhalan laheyd weerarkaasi ayay dad badani waxaa ay qabaan in sababtu ay tahay in qaar ka mid ah dadkii la sheegay in weerarka ay geysteen aysan aheyn Soomaali, balse ay yihiin dadyow kale oo ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee dega Kenya.
Waxaa taasi xigay qarax kale oo maalin ka hor ka dhacay bartamaha magaalada Nairobi, hasayeeshee dad badan ayaa ka carooday hadal ka soo yeeray taliyaha booliska ee Nairobi Philp Ndolo oo daqiiqado yar un ka dib markii uu weerarka dhacay u sheegay warbaahinta maxaliga in ninkii ka dambeeyay qaraxaasi uu ahaa Soomaali.
” Nin gaari gacan watay ayaa waxa kireystay oo kaartoon alaab ay ku jirto u dhiibay nin Soomaali ah, ninkii inta uusan gaarin wadadad Tom Mboya ayaa ninkii (Soomaaliga ahaa ) waxaa uu u sheegay xamaaliga in uu soo hilmaamay sharcigiisa, waxaan uu ka codsaday in halkaasi ku sugo, si uu usoo qaato, balse waxaa qarxay kartoonkii uu waday ninkii xamaaliga ahaa” Sidaasi waxaa yiri Philp Ndolo oo ah taliyaha booliska ee Nairobi.
Hadalka taliyaha ayaa waxaa ka carooday dad badan, iyagoo na su’aal geliyay sida taliyaha uu mudada kooban ku ogaaday in ninkaasi uu ahaa Soomaali iyo inkale, maadaama ay jiraan dad badan oo muuqaal ahaan ay isku egyihiin Soomaalida, gacanta na aanan lagu dhigin ninkii tuhunsanaha ahaa.
“Kolay taliyaha wuu degdegay,dadkii uu la hadlay ayaa ku yiri ninka Soomaali buu ahaa, madaama uu isagu yahay taliyaha booliska ee Nairobi in uu arrimahaasi oo kale uu ku degdego ilaa iyo inta baartitaanka laga sameynayo ma aheyn, mana ahan in qowmiyad dhan aad ka dhigto tuhunsanayaa, waana arrin aan waafaqsaneyn nidaamka”. Sidaasi waxaa BBC-da u sheegay Cali Baashi oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada.
“Ninkii taliyaha ahaa ee hadlay ee yiri Soomaali ba qaraxaasi usoo dhiibtay ninka wuxuu ku hadlay magaca dowladda, waxayna lamid tahay dowladdii oo tirahday Soomaali baa qaraxaasi ka dambeesay, marka waxaa loo bahnaa in baaritaan la sameeyo marka hore”.Maxamed Cabdirisaaq oo khabiir arrimaha ammaanka ayaa sidaasi u sheegay BBC-da.
Arrintan ayaa waxaa dhowr jeer oo hore warbixin kasoo saaray hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights watch oo sheegtay in Soomaalida xaafadda Islii intooda badan lagu tilmaamo argagixiso.
Qowmiyada badan oo dega dalka Kenya ayaa la aaminsan yahay in muuqaal ahaan ay isu egyihiin Soomaalida, kuwaasi oo ay kamid yihiin Booranta, Sambuuru, Burjida, Rendille iyo kuwa kale oo dega gobolada kale ee Kenya.
Maxamed ayaa sidoo kale BBC-da u sheegay: “Weerarkii DusitD2 waxa ku iray rag la yaqaanay qabiiladooda, lama na aadin balse taliyaha markii uu yiri qaraxii waxaa soo dhiibay waxaa la weydiin lahaa ma kala saari kartaa ninka Soomaaliga ah iyo ninka Tutsiga ah, ma kala saari kartaa ninka Soomaaliga ah iyo kan Booranta, qofkasta oo timo jilicsan oo Qamiis xiran haddii la dhaho waa Soomaali, raga Soomaalida u eg maxa yihiin ma Soomaali ba? Askarigaasi waa uu fududaay, arrintaas na waa lagu qabsan karaa oo waa lagu maxkamadeyn karaa”. Ayuu raaciyay Maxamed.
Inta badan weerarka Al Shabaab ay ka geystaan gudaha Kenya ayaa waxaa ay dhibaato kasoo gaartaa dadka Islaam-ka, gaar ahaan soomaalida kuwaasi oo xita dhacda in mararka qaar ay dhacdo inay waxyeelo kasoo gaarto dadyowga kale ee ay dhibaatadu kasoo gaarto weerarada Al Shabaab.